Izinzuzo ze-ECN Broker phezu kokubhekana nabadayisi bamaDiski | I-FXCC
Forex ECN Trading Model vs Fixed Spread Trading Forex Broker Trading
Ngakho-ke yiziphi umehluko ophawulekayo phakathi komthengisi we-ECN / STP kanye nabathengisi bama-desk, abavame ukubizwa ngokuthi "abenzi bemakethe"? Senze itafula elilula lezinzuzo nezindleko, ukuze sichaze amaphuzu asemqoka phakathi kwe-ECN / STP wabathengisi kanye nokuphatha abadayisi / abadayisi bemakethe, kodwa sasicabanga ukuthi singaphinde sithathe leso sikhilomitha esengeziwe ukuze sichaze umehluko ngokuningiliziwe.
I-Spread Spread Platform ehleliwe
Kumthengisi we-forex yokuhweba amapulatifomu, umthengisi uyazi izikhundla zakho ezivulekile, isitayela sokuhweba namaqhinga futhi angasebenzisa lolu lwazi ngenzuzo yakhe.
Ku-ECN ye-FXCC, ungathengisa masinyane ngamanani asakazwe yizikhungo zezimali eziholayo.
Ama-quotes kabusha ajwayelekile ekuhwebeni kwendabuko yokuhweba. I-FXCC ayiphindi futhi. Ubuchwepheshe besikhulumi kanye nenqubo eqondile yamanani / isikhathi esithinta ukusebenzisana yakhelwe ukugcwalisa ukuhweba kwakho ngentengo yamakethe yamanje.
I-FXCC ayithathi isikhundla ngokumelene namaklayenti ayo nhlobo.
Ukuhweba Phakathi Kokukhishwa Kwezomnotho
I-FXCC ivumela wonke amaklayenti kungakhathaliseki ukuthi usayizi wezohwebo wangaphambili ukuhweba nokufaka imiyalo emisha ngesikhathi sokukhishwa kwezomnotho okusemqoka. Phakathi nalokhu kukhishwa, futhi ngezikhathi ezithile zokungahambisani nemakethe okungavamile, ukushayisana / ukunikezwa kwesibonelelo kukhulu kunalokho okutholakala ngesikhathi semakethe 'evamile'.
Yimuphi uhlobo lomthengisi?
Noma yiluphi uhlobo lomthengisi ozibheka njengalo: isikhathi esithile, isikhathi esiphelele, noma sokuzilibazisa futhi noma yikuphi izinga lakho lokuhlangenwe nakho kukhona okunye okusebenzayo ekuhwebeni, okufana nabathengisi abasha njengalokhu kuhlangene kakhulu; isimo sengqondo sokuhweba ngaso sonke isikhathi siphumelela. Abathengisi kufanele njalo, kungakhathaliseki ukuthi bahlangene kanjani nesipiliyoni, bathuthele ukuqeqeshwa kokuhweba ngokuzikhandla nokuzikhandla okukhulu.
Ukukhetha uMthengisi Olungile kubaluleke kakhulu
Uhlobo lomthengisi owukhethayo yisinqumo esibucayi, esizoba nomthelela omkhulu ekuphumeleleni kwakho okungenzeka. Ingabe kufanele ukhethe umthengisi wedesksi osebenzayo, noma umdayisi wedesksi osebenzayo? Kuyindlela ecacile nombuzo, kanti omunye sizokuphendula ngokushesha. Abathengisi abakhulu, abazinikezele, abaye bahlakulela umbono wezobuchwepheshe nezindlela, kufanele bakhethe kuphela imodeli yokuhweba ye-ECN / STP njalo futhi sizochaza ezinye izizathu zokuthi kungani.
Okokuqala, iningi labathengisi be-FX bangabathengisi basuku noma abaqashi - abathengi babo abangakwazi ukuhlala ngemizuzwana, imizuzu, noma amahora labadayisi be-FX abambalwa abamba ukuhweba kwe-FX ngobusuku obubodwa. Ngakho-ke kufanele kube yisinqumo esilula sokunquma ukuthi ngabe ungathanda yini ukusabalalisa, kodwa ukhokhe ikhomishana ngayinye ngezohwebo nge-ECN / STP umdayisi, ngokubhekene nokusabalala okubanzi futhi (ngokweqile) akhokhe amakhomishana.
Ukusebenzisana nabathengisi bedeski "benza imakethe", imakethe yabo. Bakhululekile ukucaphuna intengo yabo yokwenza (ngokuya ohlwini lwezimiso zabo eziguquguqukayo) okungabandakanya ukuthi mncane kangakanani uketshezi lwabo, ngokususelwa kumthamo webhizinisi abawenzayo egameni lamakhasimende abo. Ngakho-ke izingcaphuno zabo ziyizingcaphuno zokufakelwa.
Ukuphatha idesk ekusakazeka kuvame ukuxubha, okungabonakala kukhangayo uma becaphuna ukusakazeka okuhleliwe, isibonelo, ipayipi elilodwa ku-EUR / USD. Kodwa-ke, abathengisi bangase bathole ukuhlwitha nokugcwala okugcwala, okusho ukuthi iqiniso ligcwaliswa kuze kube manje kusukela entengo yamakethe yangempela ukuthi ukusakazeka kusondelene nambili, noma amapayipi amathathu ngokuthengiselana. Umthengisi wedesksi osebenzayo angase aphuze ukugcwalisa umyalo ngomzamo wokuthola intengo engcono kakhulu yomthengisi.
Kodwa-ke, umehluko omkhulu kakhulu phakathi kokusebenzisana nabathengi bama-desk kanye nabathengi be-ECN / STP yiqiniso ukuthi abathengisi bama-desk abasebenza ngokubheja baphikisana namakhasimende abo. Uma iklayenti ledeskini elisebenzayo lizuza kanjalo umthengisi ulahlekelwa, baphumelela ngokuphambene neklayenti. Manje ngenkathi ingxabano ingafakwa phambili ukuthi ngemigomo emikhulu umdayisi wedesksi osebenzayo akahambisani nalokho okushiwo, iqiniso lihlala likhona ukuthi umdayisi wedesksi osebenzayo uthatha isikhundla esibheke enzuzo uma iklayenti ilahlekelwa.
Ngomfanekiso we-ECN / STP ukusabalala kuyashintsha, kuye ngokuthi izimo zamakethe zangempela nganoma yisiphi isikhathi futhi izingcaphuno ezihlinzekwa abahlinzeka ngempahla; ehlanganisa amabhange amakhulu kanye nezikhungo ezifaka inethiwekhi kwinethiwekhi ehleliwe. Abahwebi bakhokhela imali encane yokuthengiselana ngezohwebo futhi ngokuvamile akukho amakhomishini ahlawulisiwe. Ngomthengisi we-ECN / STP baba yibhuloho, umzila phakathi komhwebi nomakethe. Umhwebi uthola ngqo emakethe nge-elekthronikhi indawo yokuhweba indawo ngaphandle kwesivinini, akukho ukuphazamiseka futhi akukho ukungenelela. Amanani avela kwinethiwekhi, ichibi lokuthengisa elidalwe ngabanikeli.
Ngomfanekiso we-ECN / STP awukho nanoma yiziphi izingcaphuno eziphindaphindiwe, wonke ama-oda agcwaliswa ngentengo engcono kunanoma yisiphi isikhathi esithile. Ngezinye izikhathi lezi zingcaphuno zingaba yinzuzo enhle kakhulu, njengezinga eliphansi njengephesenti encane ye-pip, mhlawumbe i-0.1 kuye komthamo womsebenzi ngaphakathi kwe-ECN futhi lokho kusiletha kwenye inzuzo eyinhloko yokuhweba nge-broker ECN / STP; ukujula kwemakethe.